सशस्त्र प्रहरीद्धारा लागुऔषधसहित पक्राउ काठमाडौं, झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका १५ ईलाकाबाट भाद्र १५ गते सशस्त्र प्रहरीले करीव १६ ग्राम १५ मिलिग्राम ब्राउन सुगरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सोही जिल्लाको शिवशताक्षी नगरपालिका ७ बस्ने २१ बर्षिया निशा जोगी र मोरङ्ग जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका १० बस्ने ३९ बर्षिया बिमला ढकाल छन् । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट ज्यामिरगढीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले शंका लागि जाँच गर्दा उनीहरुको साथमा उक्त ब्राउन सुगर फेला पारेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई बरामद ब्राउन सुगरसहित आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझार्ईएको छ । यसैगरी सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका ९ पोखरीस्थित सीमा ईलाकाबाट भाद्र १६ गते सशस्त्र प्रहरीले करीव २२ के.जी. गाँजासहित सोही ठाउँ बस्ने २४ बर्षिय ललित कुमार महतोलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट मलंगवाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले शंका लागि जाँच गर्दा उनको साथमा उल्लेखित परिमाणको गाँजा फेला पारेको हो । पक्राउ परेका महतोलाई बरामद गाँजासहित आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाईएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीद्धारा लागुऔषधसहित पक्राउ
काठमाडौं, झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका १५ ईलाकाबाट भाद्र १५ गते सशस्त्र प्रहरीले करीव १६ ग्राम १५ मिलिग्राम ब्राउन सुगरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सोही जिल्लाको शिवशताक्षी नगरपालिका ७ बस्ने २१ बर्षिया निशा जोगी र मोरङ्ग जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका १० बस्ने ३९ बर्षिया बिमला ढकाल छन् । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट ज्यामिरगढीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले शंका लागि जाँच गर्दा उनीहरुको साथमा उक्त ब्राउन सुगर फेला पारेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई बरामद ब्राउन सुगरसहित आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझार्ईएको छ । यसैगरी सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका ९ पोखरीस्थित सीमा ईलाकाबाट भाद्र १६ गते सशस्त्र प्रहरीले करीव २२ के.जी. गाँजासहित सोही ठाउँ बस्ने २४ बर्षिय ललित कुमार महतोलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट मलंगवाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले शंका लागि जाँच गर्दा उनको साथमा उल्लेखित परिमाणको गाँजा फेला पारेको हो । पक्राउ परेका महतोलाई बरामद गाँजासहित आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाईएको छ ।